Sideen Guriga ugu Sameysannaa Jeermis Dile Dabiici ah? | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Afrikaan.so, July 18, 2020
Baarkii Malaa’igta (Bar Degli Angeli)
Ilhaan Ciise Maxamed — April 10, 2020
Jeermis dile: waa in laga hortago koritaanka jeermis dhaliyaha ama badashada caabuqa kadhasha jeermiska. Adduunkaan aan ujeedno maantay ee wax waliba heer fiican ka gaarsiisan, waa in aan ogaannaa in uu soomaray waqti ey ku xisaabtami jireen maxaan heysannaa maantay, Maxaan qaban karnaa? Maxaan awoodnaa?
Annagu ma’ahan in aan dhahno jeermis dilaha Yurub laga isticmaalo waxaan ahayn marabno ama jeermis dile Soomaaliya lagu sameeyay miyaa wax ii tarayo iyo wixii lamid ah?
Waa ceeb qof og in uunan waxba qabsan karin oo kali ah, qof og in dad kale wixi laga keenay oo kali ah ey fiican yihiin, maantay waxaa lajoogaa xilligii aan isku tashan lahayn, xilligii aan xaqiiqada ogaan lahayn, waa xilligii hal abuurkeennu fiicnaan lahaa!!
Marumeysaney saa in dhiig bax oo kali ah u dhiman jirtay dunidaan hormarsan maantay!! Way kasoo gudubtay hadda! maalin bey u dhamaan jireen dhawaacyo soo gaaray? Maalin baa loo dhiman jiray nabaro aan tabar lahayn? Maantay wey kasoo gudubtay heer waxaa lamarayaa xubno la’isku badalo, heer waxaa lamarayaa xubno la’isku tallaalo, heer waxa ey dunida joogtaa maantay oo aan marqaati kannahay wadnaha ey dadku isku badalayaan, balse 100 sano kahor intee lajoogay, waa 100 sano kahor marki dhaawacyada loo dhamaan jiray!!
Waxa aan ubbaahannahay bulshadeenna in ey xaqa fahmaan, in ey runta fahmaan, in xaqiiqada gartaan, waa in aan joojinnaa isqancinta aanan wax qabadka lahayn.
Waa in aan ku xisaabtannaa maxaan heysannaa? Maxaan awoodnaa in aan isweydiinno? War dhibka aan garanno maalin maantay ahayn waan u baqanayaa in aan shallayno, oon calaacalno. Waa in aan ku xisaabtannaa tabarteenna iyo waxa aan awoodno.
Agabka aan soo diyaarsaneyno waa:
2. Saliid qumbe ama saliidda aad heli karto (essential oil)
3. Biyaha caafiga.
4. Caag nadiif ah ama dhalo nadiif ah.
5. Saabuunta dareeraha ah.
Qaabka Aan Usameyneyno:
Soo qaado weelka aad nadiifisay, ku shub 15 dhibcood ama seddex furka yarka ah oo Qalka ah (Vinegar),
Ku dar 20 dhibcood oo saliidda ah (Sababta aan saliidda u isticmaaleyno waa in aan ilaalinno maqaarka gacmaheenna oo uusan u qalalin), kaddib aan ku darno saabuunta dareeraha ah iyo biyaha caafiga ah ama lakar kariyay. Halkaas waxa aan ku heysannaa jeermis dile dabiici ah oo aan isticmaali karno xilliyada ey qatartu jirto.
Allow adaa baariyoo bad baadana lehe, rabbow bulshadeyda beylahdaa baan bad-baado kuu weydiin.
Tags: Sideen Guriga ugu Sameysannaa Jeermis Dile Dabiici ah?
Next post Covid-19 Wuxuu Sii Hurinayaa Xiriirka Caalamiga ah
Previous post Waa Maxay Faa’iida Laga Helo Safarka?